बुढेसकालकी कान्छी हो नी ! – Mero Film
बुढेसकालकी कान्छी हो नी !
ओए ! फलानोको पोइले त सारी पो मिलाइदिदै थियो, त्यो पनि बसेरै हाहाहा…
लौ हो र ? बुढेसकालमा पनि के बैश आको होला त नि है हाहाहा….
बुढेसकालकी कान्छी हो नी । यसै गर्नलाई त ल्याको रैछ ।
हो, उनीहरुको बिवाह ढिलो नै भएको हो । नेपाली समाजको भाषामा भन्दा बुढीकन्याको बिहे स्वास्नी मरेको एउटा अधबैसेसंग भएको थियो । ४० छेउछाउकी उनी र ५० भर्खरै नाघेका उनका पतिको बिवाह नेपाली फिल्म जगतका शिल्पा-छवी, राजेश-मधुको भन्दा उमेर अन्तर चै कम नै थियो । तर हाम्रो समाज हो नी कुरा काट्न बहानाको के कमि ।
बिहे पछि पनि लामो समय संगै बस्न पाएनन् । कारण थियो केटीको जागिर । चाहना त पक्कै हुदो हो बिहेपछी संगै बसौ भन्ने । यस्तैमा बैशाखमा बिहे भएको, महिना बित्दै जादा दशैं आयो । अफिस बिदा भएपछी उनी माइतबाट आफ्नो पतिको घर लागिन् । घरमा टिका लगाईवरी पहिलो बर्ष कोशेली पात बोकेर उनीहरु माइत-ससुराल लागे ।
दशैँ कै क्रममा माइतीका आफन्त कहाँ टिका थाप्न जाने क्रममा उनका पतिले पत्नीको नमिलेको साडी मिलाइदिएका थिए, यसो रुखको आडमा बसेर ।
कुरौटे छिमेकीको आँखा न हो, देखि त हाले । फेरी के चाहियो र बहाना !
घटना यहि हो, करिव १५बर्ष अगाडी म मुस्किलले १० बर्षको थिए, छिमेकी आन्टीले गरेको कुरा सुनेको । त्यो वाल मस्तिष्कले त छुट्याउन सकेको थिएन त्यो सहि हो या गलत । तर आज जब मेरो आफ्नै विवाह भयो नि, त्यो क्षण लजाउन पर्ने कुरा काट्ने या घोसे मुन्टोलाउने कारण नै थिएन झैँ लाग्छ । किनकी दुनियाँको अगाडी नमिलेको कपडा लगाएर श्रीमतीलाई लिएर हिड्नु भन्दा आफुले मिलाइदिए त के भयो ? सधै श्रीमतीले कपडा धोइदिन मिलाईदिन हुने तर श्रीमतीको लुगा मिलाउदा गलत के छ र ? दुनियाले उनलाई छि भन्नु, खिसी ट्युरी गर्नु भनेको श्रीमानको समेत शिर निहुरिनु हैन र ? र आज पनि म वहाहरुको फ्यान हो । वहाहरुलाई हेर्दा लाग्छ वाह ! जोडी होस् त यस्तो मिलेको । एक्सप्लोर लव, माया फैलाऔ !!!
२०७६ असार २६ गते ८:१५ मा प्रकाशित
अमर न्यौपानेको उपन्यास ‘गुलावी उमेर’ लोकार्पण